Iyo American Revolution - 1763 kusvika 1789
American Revolution mabhuku
Mamepu eAmerican Revolution mepu
American Revolution chirevo #1
American Revolution chirevo #2
American Revolution chirevo #3
American Revolution chirevo #4
American Revolution chirevo #5
American Revolution chirevo #6
American Revolution chirevo #7
American Revolution mazwi
Zvinyorwa zveAmerican Revolution
American Revolution chinyorwa mibvunzo
American Revolution mifananidzo
American Revolution nhoroondo
American Revolution inonyuka
American Revolution nhaurwa
American Revolution nguva
American Revolution misoro
American Revolution ndiani
American Revolution izwi rekuchenesa - pfungwa
American Revolution izwisearch - zviitiko
American Revolution izwisearch - vanhu
American Revolution izwisearch - nzvimbo
American Revolution mazwi ekuziva
The American Revolution yakatanga pakati-1760s sekumukira kwevaBrithani vemo vekuBritain vaigara padivi pemhenderekedzo yegungwa yeNorth America. Yakaguma mu1789 nekusikwa kwenyika itsva, yakatsigirwa nebumbiro remutemo uye hurongwa hutsva hwehurumende.
Shanduko yeAmerican yakachinja zvakanyanya nhoroondo yemazuva ano. Izvo zvakanetsa uye nekuremekedza simba rechokwadi rean European monarchies. Iyo yakatsiva humambo hweBritain nehurumende inoshanda yakavakirwa pamisimboti Yekujekesa mutemo we republicanism, hutongi hwakakurumbira uye kuparadzaniswa kwemasimba.
Iyo American Revolution yakaratidza kuti kumukira kunogona kubudirira uye kuti vanhuwo zvavo vanogona kuzvitonga. Pfungwa dzayo uye mienzaniso yakakurudzira iyo French Revolution (1789) uye yakatevera nyika yekuzvitonga uye yekuzvimiririra. Kunyanya kukosha, Shanduko yeAmerican yakazvara United States, nyika ine hukoshi hwezvematongerwo enyika, simba rehupfumi uye masimba ehondo akaumba nekutsanangura nyika dzazvino.
Iyo nyaya yeAmerican Revolution ndiyo imwe yekukurumidza kuchinja uye zviitiko. Pamberi pama1760s, iyo 13 maAmerican colonies aifarira makumi emakore kubudirira kwehupfumi uye hukama hwakanaka neBritain. Vazhinji veAmerica vaizvitora sevakavimbika veBritain; ivo vaigutsikana kuti vave vanotongwa namambo akangwara uye akanaka weBritish kupfuura varanda nevaranda vevadzvinyiriri vatorwa. Kuti shanduko inogona kuitika munharaunda yeAmerica yekoloni yakaratidzika sezvisina musoro.
Munguva yepakati-1760s, kuvimbika uku kuBritain kwakaedzwa nechinhu chinoratidzika sechisina basa: kusawirirana uye nharo pamusoro pemitemo yehurumende nemitero. Mukati megumi emakore, varimi vekuAmerica vaive vakabata machira nesekeji uye vachienda kuhondo vachirwa nemauto eBritish kuLexington, Massachusetts. Pakazosvika pakati pe1776, vezvematongerwo enyika vekuAmerica vakafunga zvisungo neBritain zvakaputswa zvisinga gadzike zvekuti vakavhotera rusununguko. Rusununguko urwu rwakaunza nematambudziko maviri: hondo neBritain, simba repasirese renyika, uye kudiwa kwehurongwa hutsva hwehurumende. Kusangana nematambudziko aya kwakaratidza chikamu chekupedzisira cheAmerican Revolution.
Alpha Nhoroondo yeAmerican Revolution webhusaiti ine mazana emahara ekutanga uye sekondari zvinyorwa kuti akubatsire iwe kunzwisisa zviitiko muAmerica pakati 1763 uye 1789. Wedu mapeji emusoro, yakanyorwa nevadzidzisi vane ruzivo uye vanyori venhau dzakaitika, vanopa zvipfupiso zvezviitiko zvakakosha nenyaya. Ivo vanotsigirwa nereferenzi yemhando senge nguva, glossaries, biographical profiles, mamepu epfungwa, zvinyorwa, nhoroondo uye profiles dzevakakurumbira vanyori venhoroondo. Webhusaiti yedu zvakare ine huwandu hwemabasa epamhepo online se crosswords uye sarudzo yakawanda mibvunzo, kwaunogona kuyedza uye kudzokorora nzwisiso yako yeAmerica mukuchinja.
1765 kuna 1773
1774 kuna 1776
1777 kuna 1783
1784 uye kupfuura